Xabad joojinta magaalada Xumus - BBC News Somali
Xabad joojinta magaalada Xumus
Magaalada Suuriya ku taal Xumus ayaa dawlada iyo mucaaridku ku gaadheen heshiis xabad joojin ah.
Heshiiskan muhiimka ah ee xasaasiga ah ayaa waxaa la gaadahay kadib markii laba sanno oo wadahadalai ay soo jiitamayeen.
Wajiga hore ee heshiiska ayaa boqolaal dagaalyahano oo qaarkod Al_qaacida ku xidhanyahiin ka bixi doonaan xaafado ay ku go’doonsan yahiin oo magaalada ah , waxaana loo kaxeeyn doona xaga gobolka Idlib oo ay mucaaradiku xukumaan .
Kuwa aan aad u xag jirin ee heshiiska saxeexay waxay joogi doonaan iyagu xaafada Alwiir. Heshiiskani ayaa micnahiisu yahay in XUMUS oo ahayd meelaha dagaalada ugu badani ka dhaceen ay immika gacanta uwada gashay dawlda Suuriya.